﻿Komputermen စာမျက်နှာ 1
အတန်းဖော် လူမှုကွန်ယက် Odnoclasssniki ရိုးရှင်းစွာအသီးအသီးအခြား, ဝေစုအတွေ့အကြုံတွေကိုသို့မဟုတ်သတင်းနှငျ့ဆကျသှယျနိုင်ရန်အတွက်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဒီ site ပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာအလိုက်ပစ္စည်းများထည့်လေ့မရှိ။ သမျှအကြောင်းပြချက်အဘို့, သင်၏မိတ်ဆွေများကနေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်သတင်းစိတ်ဆိုးရန်စတင်သောအခါ, အကြိမ်ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သင်အပေါ်အုပ်စုခွဲအမြင်ပဲအရသာပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဒါဟာအစလူတဦးရိုင်းစိုင်းသို့မဟုတ်စော်ကားခဲ့ကြောင်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ သင်သည်ဤအမှု၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း ကို တိပ်ကိုယ်တိုင်ကမှဖယ်ရှားပစ်သည် မိတ်ဆွေများကနေ updates များကိုမခံမယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုအတော်တော်များများနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်။ ပထမဦးဆုံး - ထိုတိပ်ကိုယ်တိုင်ကမှကိုယ်တိုင်ကဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအဆင့်သုံးဆင့်၌ပြုကြဖြစ်ပါတယ်: ဆိုက်"http://ok.
command line ကန့်အသတ်တွေနဲ့ program ကို run ဖို့ဘယ်လို | Windows ကိုစွယ်စုံကျမ်း
အစီအစဉ်  မကြာခဏဆိုသလိုအစီအစဉ်များအမျိုးမျိုးကြောင့်စတင်လိုက်တာနဲ့ activated သင့်ကြောင်းအထူးသည့် command-line ရွေးချယ်စရာသတ်မှတ်ဖို့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့န်ဆောင်မှုနှင့်အတူနှောငျ့ယှကျမပေးခဲ့ပါဘူးဥပမာ, အစီအစဉ် QIP, သင်တို့ကို "အထီးကျန်/" သော့ချက်အတွက် parameters တွေကိုသတ်မှတ်ရပါမည်။ ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုနေသလဲ?
အခြေအနေကိုဂိမ်း, သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုကို run ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါကွန်ပျူတာမနှစ်မြို့ဖွယ်, ဒါပေမယ့် solvable ဖိုင်တစ်ဖိုင် msvcp100.
Windows ကို 8/RT ကိုများအတွက် PressReader တက်ဘလက် screen ပေါ်မှာသင်အကြိုက်ဆုံးစာပမြေား
သင်က Windows 8/RT ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏တက်ဘလက်များအပေါ်မဂ္ဂဇင်းနှင့်သတင်းစာများကိုဖတ်ရှုချင်ပေမယ့် Windows Store ကိုတစ်နေရာတည်းတွင်သူတို့အားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုလို့ဒီလိုလျှောက်လွှာ, မကြောင်းယုံကြည်ပါတယ်သလား?
ပုံနှိပ်နံပါတ်များအစားအက္ခရာများ - ဘယ်လို Fix ရန်
သင်မယ့်အစားနံပါတ်များကိုပုံနှိပ်စာလုံးတစ်ဦး Laptop ကိုကီးဘုတ် (များသောအားဖြင့်ဒီသူတို့အပျေါမှာဖြစ်ပေါ်) အပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး - ဒီအခွအေန fix ဖို့ဘယ်လို၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ ပြဿနာဒါပေမဲ့အက္ခရာများနှင့်အတူအချို့သော keys တွေကိုလုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ (ထို "ကြီးမားသော" keyboards ထဲမှာလက်ျာဘက်၌တည်ရှိသည်) ကိုတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံထားကိန်းဂဏန်းတွေ keypad မပါဘဲကီးဘုတ်ပေါ်ပေါ်ထွန်းထိုသို့သော HP ကလက်တော့ပ်အပေါ်, (ဥပမာမြန်နှုန်း-dial numbers မ​​ျားကိုအဘို့သုံးနိုင်တယ် ) ထောက်ပံ့ပေး။ laptop ကိုနံပါတ်များအစားအက္ခရာများ စာရိုက်လျှင် ငါဘာလုပ်သင့် သငျသညျဤပြဿနာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့လျှင် ဒီတော့, သူ့ Laptop ကို၏ကီးဘုတ်မှာအနီးကပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အထက်တင်ပြနေတဲ့ဓာတ်ပုံနှင့်အတူတူညီသတိပြုပါ။ သငျသညျသော့ J ကို, K သည်, L ကိုအပေါ်အလားတူနံပါတ်များရှိသလား အဓိက Num Lock ကို (NUM lk)?
Ctrl + alt + Del tu restart လုပ်လိုက်ပါပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ပြဿနာ NTLDR
လက်တော့ထဲမှာဒေါင်းလုပ်နှင့်အတူအဆိုပါပြဿနာများ NTLDR ပျောက်ဆုံး Ctrl + alt + Del tu restart လုပ်လိုက်ပါအတွက်